Damaashaadka Dublin si loo sugo sanadka 2022 - Dabaaldag
Damaashaadka Dublin si loo sugo sanadka 2022
St, Patrick's Festival
Bandhiga Buugaagta Dublin
Xaflada Miraha Xaaraanti ah
Festival Fringe Dublin
Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo Dublin waa ka qaybgalka mid ka mid ah ciidaha maxalliga ah ee magaalada. Shaki la'aan, damaashaadkan gaarka ah ayaa ah habka ugu fiican ee booqdayaashu ay ku bartaan dhaqanka deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin madadaalo badan!
Damaashaadka Dublin waa dhacdooyin sanadle ah oo abuura dareen bulsho oo la wadaago. Kuwa ugu caansan ayaa aqoonsan adeegayaasha caanka ah ee St. Patrick. Xafladaha kale waxay xusaan fanka iyo masraxa, suugaanta, muusiga iyo farsamada.
Dhib malaha sababtu, waxaa jirta fursad sare oo ah in sanadkan Dublin uu ka dhici doono dabbaaldeg, dhiirigelin doona, oo kugu soo jiidan doona inaad isku daydo wax ka duwan.
17-ka Maarso waxay calaamad u tahay dabbaaldegga caanka ah ee St. Patricks Day. Markii hore Maalinta St Patrick waxay si fudud u ahayd dabbaaldeg hal maalin ah oo loogu talagalay ilaaliyaha quduuska ah ee Ireland. Si kastaba ha ahaatee, waxay u kortay iid shan maalmood ah. Dhacdadu waxay ku soo gebogebowday Bandhigga St. Patricks Day Parade, kaas oo masaska dhex mara bartamaha magaalada. Waxay u muuqataa in dhammaan dadweynaha Ireland ay ku sugan yihiin waddooyinka iyagoo eegaya bandhigga caanka ah. Haddii aad qorsheyneyso safar aad ku tagto Dublin bishaan Maarso, ka dib hubi inaad booqato 17-ka.
Caadi ahaan, waxaa jira mawduuc ku saabsan xafladda. Tusaale ahaan, sheeko-sheegiddu waxay u ogolaataa booqdayaasha inay ururiyaan qaddarin kala duwan oo dhaqanka Ireland ah. Waxa jira dhacdooyin badan shanta maalmood ee ka horreeya March 17-keeda. Muusiga tooska ah, bandhig faneedka iyo muraayadaha sayniska ayaa tusaale u ah kuwan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira aqoon-is-weydaarsiyo dadka waaweyn, wadahadalo cunto karinta, iyo culeysyo kale oo badan. Inta badan ficilku wuxuu ku yaalaa gudaha tuulada Festival ee ku taal Merrion Square.
Bandhiga Buugaagta Dublin waxa uu dhacaa Noofambar. Bandhiga ayaa u dabaaldagaya sida ugu wanaagsan ee suugaanta Irishka iyo qorayaasha soo baxaya. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay in ka badan lixdan dhacdo oo ka dhacay goobaha Dublin. Kuwaas waxaa ka mid ah maktabadaha, xarumaha qoraalka, jardiinooyinka dhirta, tiyaatarada iyo baararka. Waa arrin lagama maarmaan u ah dhammaan suugaanta jecel, qorayaasha soo baxaya iyo gorgorrada dhaqanka.
Bandhiga Buugaagta Dublin waxa uu dhacayaa afar maalmood. Bandhiga waxaa lagu soo bandhigaa noocyada suugaanta sida gabayada, sayniska, majaajilada, taariikhda iyo khayaaliga. Intaa waxaa dheer, barnaamijka kala duwan waxaa ka mid ah wadahadalo, aqoon-is-weydaarsiyo iyo bandhigyo. Xuddunta dhexe waa Tiyaatarka Smock Alley. Halkani waa meesha qorayaasha iyo booqdayaashu ay ku kulmi karaan kafateeriyada ama saxiixa buug.
Bandhiga Miraha la mamnuucay ayaa calaamad u ah bilowga xagaaga ee magaalada. Waa xaflad muusik oo leh gees koronto-pop ah iyo ruux Irish ah. Damaashaadku waa fasaxa fasaxa bangiga ee 4-5 June. Waxay ka dhacdaa gudaha dhulka quruxda badan Matxafka Irish ee Farshaxanka Casriga ah Isbitaalka Royal, Kilmainham. Sannadkan waa sannad-guuradii 10-aad ee xafladda.
Wargeysyada madaxa waxaa ka mid ah labada nin ee elektarooniga ah BICEP oo ka socda Belfast iyo koronto-pop Kiwi dareenka Lorde. Ugu dambeyntii, waxaa jiri doona xaflado qarsoodi ah usbuuca dhammaadka todobaadka iyada oo la dooranayo jilayaasha martida gaarka ah.
Festival Fringe Dublin waa bandhig faneed laga bilaabo 10 - 25 Sebtembar 2022. Waa dabbaaldeg heersare ah oo waxqabadka casriga ah, kaas oo diiradda saaraya hal-abuurnimada fanka. Fringe-gu waxa uu soo bandhigaa hibada Irishka ee ugu wanaagsan iyo falal cusub oo geesinimo leh. Waxaa intaa dheer, waxay soo dhawaynaysaa tayada caalamiga ah si ay u gutaan shaqadooda sidoo kale.
Festival Fringe Dublin waa xarun lagu kobciyo iskaashiga faneed. Dhacdadan ayaa soo jiidata in ka badan 30,000 oo xubnood oo dhagaystayaal ah 16 maalmood iyo habeen. Intaa waxaa dheer, waxay hoy u tahay WEFT, mashruuc kor u qaadaya kartida Irish Black.
Longitude waa bandhig faneed muusig oo ka dhici doona 1-3 Luulyo 2022 gudaha Marlay Park, Dublin. Xafladdu waxay soo ururinaysay uumi muddo sagaal sano ah. Waxa ay u xuubsiibtey dabbaaldeg rap iyo hip-hop oo leh saf caalami ah. Kuwaas waxaa ka mid ah fanaaniinta Maraykanka sida Megan Thee Stallion, DAVE iyo A$AP Rocky.
Magacyada waaweyn ayaa kafaala qaaday dhacdada. Xafladda waxaa ka buuxa baabuur cunto waddo ah iyo baararka qabow, markaa uma baahnid inaad ka walwasho inaad shidayso. Keen teendhadaada iyo xeradaada beerta ama dooro inaad degto hoteel maxalli ah. Saddexda maalmood ee muusiga iyo qaska ayaa la dammaanad qaaday inay ka sarreeyaan filashadaada.
Festival of Curiosity waxay u dabbaaldegtaa isku dhafka farshaxanka, naqshadeynta, tignoolajiyada iyo hal-abuurka. Waxay ka dhacdaa guud ahaan 14 goobood oo ku yaal bartamaha magaalada Dublin. Dhacdooyinkan waxa la qabtaa Julaay oo dhan. Sannadkan ayaa xusi doona sannad-guuradii 10-aad ee xafladda.
Dabaaldeggu waxa uu dhegaystayaasheeda ka qaybqaataa waayo-aragnimo ciyaar iyo ka qaybqaadasho leh oo aan cidna ku qanacsanayn. Waayo-aragnimada la midka ah waxaa bixiya a casino online Ireland, halkaas oo aad ka heli karto tiro badan oo madadaalo iyo ciyaaraha casino soo jiidasho leh. Si kor loogu qaado, dabbaaldegyada xiisaha ayaa leh barnaamij la yiraahdo Habeenada Curigga, waaba haddii Maalmaha Ciyaartu ku filnaan waayaan. Caannimada weyn ee xafladda awgeed, waxay iibisaa isla markiiba sannad kasta.
Dublin wax badan ayaa lagu soo bandhigaa haddii aad tahay rapster, bookworm, hal-abuure ama aad rabto inaad tijaabiso wax cusub. Halkan waxaad ku dhex milmi kartaa taariikhda iyo dhaqanka labadaba. Markaa, marka aad qorshayso bixitaankaaga sanadkan, iska hubi inaad tixgeliso qurbaannada ciida Dublin.
Wakhtiga Jasiiradda Frog ayaa ugu dambayntii imanayaa dhammaan Consoles oo beddel xagaagan!
Nolosha Xisbiga Kadib: Mid kale oo ku jira Baaldiga Filimka Netflix
si toos ah uga daawo tv -ga online
degel leh filimo cusub oo lacag la'aan ah si aad uga daawato internetka
soo dejiso dhacdooyin show tv oo bilaash ah
daawo oo kala soo bax filimada khadka tooska ah
Goobaha anime ee bilaashka ah ee ingiriisiga ayaa hoos loo dhigay